Amathrendi Wokumaketha Ividiyo ka-2021 | Martech Zone
Amathrendi Wokumaketha Ividiyo ka-2021
Ividiyo yindawo eyodwa engizama ukuyikhulisa kulo nyaka. Ngisanda kwenza i-podcast nge U-Owen weSikole Sokumaketha Ividiyo futhi wangigqugquzela ukuthi ngisebenzise umzamo owengeziwe. Ngisanda kuhlanza iziteshi zami ze-Youtube - kimi uqobo kanye naku Martech Zone (ngicela ubhalise!) futhi ngizoqhubeka nokusebenza ekutholeni amavidiyo amahle futhi ngenze namavidiyo wesikhathi sangempela.
Ngakhe i- ihhovisi lasekhaya ngonyaka odlule futhi ngathenga i- I-Logitech BRIO Ultra HD Webcam kanye I-Ecamm Bukhoma. Laba bobabili banikeza isithombe esimangazayo futhi nehhovisi lami libukeka licijile ngempela… ngakho-ke anginazaba zokuthi angikwenzi! Ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka nokusebenza ngakho. Kunzima ngokwanele ukuhambisana nokushicilelwa, i-podcast, kanye nebhizinisi lami… kodwa ngiyazi ukuthi ngizozuza ngokwenza umzamo.
Izibalo Zokuthengisa zevidiyo
Kunezibalo ezithile ezinamandla ezisekela imizamo yokuthengisa ividiyo:
Abaningi Ama-85% amabhizinisi basebenzise ukumaketha kwevidiyo ngandlela thile ngo-2020 phezulu i-24% kusuka eminyakeni eyi-4 eyedlule.
Ama-99% amabhizinisi le vidiyo esetshenzisiwe ngonyaka odlule bathi bahlela ukuqhubeka… ngakho-ke kusobala ukuthi babona inzuzo!
Ama-92% amabhizinisi bakuthathe njengengxenye ebalulekile yecebo labo lokumaketha jikelele.
Izinhlobo Zokumakethwa Kwevidiyo Ezidumile
I-72% yabathengisi abasebenzisa ukudala ividiyo amavidiyo achazayo.
I-49% yabathengisi abasebenzisa ukudala ividiyo amavidiyo wesethulo.
I-48% yabathengisi abasebenzisa ukudala ividiyo amavidiyo wobufakazi.
I-42% yabathengisi abasebenzisa ukudala ividiyo amavidiyo wokuthengisa
I-42% yabathengisi abasebenzisa ukudala ividiyo izikhangiso zevidiyo.
Amathrendi Aphezulu Wevidiyo:
Ukusetshenziswa kwevidiyo kuyaqhubeka nokukhuphuka!
Ukusakazwa bukhoma sekuhambile.
Amavidiyo amafomu amafushane aqhubeka nokulawula wonke amapulatifomu.
Okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi kushayela ukuzibandakanya nokuguqulwa.
Ngenxa yokusebenza ekhaya nobhadane, amavidiyo wezemfundo namavidiyo okuqeqeshwa online akhula ngokwamukelwa nokuthandwa.
Ku-2020, ukusetshenziswa kwesikhangiso sevidiyo e-US kushaye u- $ 9.95 billion. Lokhu kulindeleke ukuthi kukhuphuke ngamaphesenti ayi-13 kuye ku- $ 11.24 billion ngo-2021 (Statista, 2019).
Amavidiyo aqhuba ukuguqulwa, ama-80% awo athi imizamo yawo yokumaketha ividiyo iholele ngqo ekuthengiseni okwandisiwe, kanti ama-83% nawo athi athola ukuhola okuningi.
Imakethe ye-AR ne-VR kulindeleke ukuthi ikhule eminyakeni embalwa ezayo futhi ifinyelele $ 72.8 billion ngo-2024 (Statista, 2020).
Ama-video angathengwa ezitolo ayanda.
Cishe eziyisikhombisa kwezilishumi abahleli kuye kwadingeka ukuthi bathuthele umcimbi wabo ku-inthanethi ngo-2020 njengengxenye yezindlela zokunqanda ukusabalala kwegciwane (PCMA, 2020).
I-Oberlo, ipulatifomu enhle yokuthi osomabhizinisi bafunde, bazakhele futhi bakhulise ibhizinisi labo lokudonswa kwe-ecommerce, ucwaninge futhi wahlanganisa le infographic eningiliziwe yokuthi ukumaketha kwevidiyo kuqhubeka nokuvela kanjani ku-2021.
Joyina i-Orberlo Mahhala!
Tags: amavidiyo we-arithonya ividiyoAmavidiyo Wokumakethaoberloamavidiyo enziwe ngezifisoividiyo yangempela-isikhathiizindabaividiyo eqondileukukhangisa kwevidiyoizibalo zevidiyoizitayela zevidiyoamavidiyo we-vr
I-TrueReview: Qoqa izibuyekezo kalula futhi ukhulise udumo nokubonakala kwebhizinisi lakho